Le Monde: ‘Xiddigaha Afrikaanta ah ee ay Qatar Jinsiyadda siisay ayaa u horseeday guushii Koobka Asia’ – Gool FM
(Paris) 11 Feb, 2019 Wargeyska caanka ah ee ‘Le Monde’ ee ka soo baxa waddanka Faransiiska ayaa qoray in guushii taariikhiga ahayd ee xulka Qatar uu ku guuleystay Koobkii Asia 1-di bishan Febraayo ay u horseedeen xiddigaha madoow ee ka soo jeeda Qaaradda Afrika ee xulkaasi u safta.
Qatar ayaa ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Koobka Asia waxa ay 3-1 kaga qaadday Koobkii xulka Japan oo 4 jeer oo hore tartankan ku guuleystay.
Wargeysku wuxuu xusay in 4 ka tirsan laacibiinta xulka Qatar la siiyay jinsiyadda Qatar, oo uu ka mid yahay xidigga xulka ee ku guuleystay dhaliyihii ugu goolasha badnaa tartanka ‘Almoez Ali’, halka 5 ciyaartooy oo kale oo ka tirsan xulkana ku dhasheen Qatar, balse Aabayaashood ay Afrikaan yihiin, taasoo tirada guud ee Afrikaanta u safata xulka Qatar ka dhigaysa 9 ciyaartooy.
Qatar ayaa badisay dhammaan 7-dii kulan ee ay ciyaartay tartanka oo ay ku jirtay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay kaga gacan sarreeyeen xulka Japan.
Xiddigaha Qaaradda Afrika ka soo jeeda ee guusha u horseeday Qatar waxa ay kala yihiin; Karim Boudiaf (Asalkiisu waa Algerian-Moroccan), Boualem Khoukhi (waxa uu ku dhashay Algeria), Abdulaziz Hatem (Asalkiisu waa Sudan), Ali Hassan Afif (Asalkiisu waa Soomaali), Assim Madibo (Asalkiisu waa Sudan), Akram Afif (Soomaali), Ro Ro (asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Portugal).
Waxaa kale oo Qatar ay ku faanaysaa Abdelkarim Hassan Fadlalla iyo Hamid Ismail oo ku dashay Doha, Qatar balse asal ahaan labaduba ka soo jeeda Sudan.
Le Monde waxay sheegtay in Qatar ay sanadihii dambe Dhalashada dalkaasi siineysay ciyaartoyda da’da yar ee Afrikaanka ah kuwaasoo xirfaddooda kubbadeed ay aad u sarreyso iyadoo marka dambena ku soo daraysay xulka Qaranka.
Qatar ayaa warbixintu intaa k u daraysaa in ay urursanayso xiddigaha kubadda cagta ee ka soo jeeda dalalka Afrika iyadoo isu diyaarinaysa Koobka Adduunka 2022-ka ee lagu qaban doono Qatar.
Dhanka kale Karim Boudiaf ayaa ku dhashay Faransiiska, waxaana iska dhalay Aabe Algerian ah iyo Hooyo Moroccan ah, waxaana Jinsiyadda Qatar la siiyay 2014-kii, halka sidoo kale Pedro Miguel Carvalho oo ku dhashay Portugal uu asalkiisu ka soo jeedo Jamhuuriyadda Cape Verde ee Afrika, waxaana uu Qatar yimid 2011-kii, iyadoo jinsiyadda Qatarna la siiyay 2016.
Weeraryahankii ugu goolasha badnaa tartankii Asia 2019, Almoez Ali oo 9 gool u dhaliyay Qatar waxa uu ku dashay magaallada Khartoum ee caasimadda Sudan, waxaana waalidkiis ay u soo haajireen Qatar isagoo 7 jir ah.
Almoez Ali: xidiggii ugu goolasha badnaa Koobkii Asia 2019
Le Monde waxay caddeysay in ay adag tahay waddan yar oo sida Qatar oo kale ah oo 80% dadkiisu Ajaanib yihiin in uu yeesho xul qaran oo dadkii dalkaasi u dhashay ah.
Waxaan ku soo gunaanadayaa in xulka Qatar uu naqshadda ka xaday waddanka Faransiiska oo xulkiisa qaranka ee ku guuleystay Koobkii Adduunka 2018 ay ku jireen 15 laacib oo Afrikaan ah oo markii labaad dalkaasi u horseeday Koob Adduun, taasoo dadka qaar ay shaki geliyeen in waxa Koobka qaaday aysan Faransiis ahayne ay ‘Qaaradda Afrika markii ugu horreysay ku guuleysatay Koobka Adduunka!’.
Waxaa Qoray: Haaruun Yuusuf Khasaaro